Indlela yokukopa iRow kwi-Excel VBA
Sebenzisa i-Excel VBA ukukopisha umqolo ukusuka kwelinye iphepha lokusebenzela ukuya kwesinye
Ukusebenzisa i-VBA kwinkqubo ye-Excel ayithandwa njengokuba kwakunjalo. Nangona kunjalo, kusekho ezininzi iinkqubo ezikhethayo xa zisebenza ne-Excel. Ukuba ungomnye wabantu, eli nqaku likulo.
Ukukopisha umgca kwi-Excel VBA yinto enokuthi i-Excel VBA iyiluncedo kakhulu. Umzekelo, unokuba ufuna ukufumana ifayile enye yazo zonke iirisithi zakho nomhla, i-akhawunti, udidi, umniki-mveliso, imveliso / inkonzo kunye neendleko zangena omnye umgca ngexesha, njengoko zenzeka-umzekelo wokubakhokela kweengxelo kunokuba kubekho ukubalwa kwe-static accounting.
Ukwenza oku, kufuneka ukopishe umqolo ukusuka kwelinye iphepha lokusebenzela ukuya kwesinye.
Isampula ye-Excel VBA ekopisha umqolo ukusuka kwiphepha elilodwa lomsebenzi ukuya kwelinye-usebenzisa iikholamu ezintathu zokulula-iqulethe:
Ikholomu ye-alpha yombhalo
Ikholomu yenani - isamba sokuzenzekelayo senziwe kwiphepha lokusebenzela elijoliswe kuyo
Umhla womhla - umhla okhoyo kunye nexesha lizaliswe ngokuzenzekelayo
Iingqalelo zokubhala i-Excel VBA Code
Ukuqalisa umcimbi okopisha umgca, hamba kunye nomgangatho-olawulo lwefowuni. Ku-Excel, nqakraza Faka kwiTebhu yonjiniyela. Emva koko, khetha ulawulo lwefowuni kwaye udwebe iqhosha apho ufuna khona. I-Excel ngokuzenzekelayo ibonisa incoko yababini ukunika ithuba lokukhetha i- macro ekhutshwe ngokuchofoza umgca weqhosha okanye ukudala entsha.
Kukho iindlela ezininzi zokufumana umgca wokugqibela kwikhasi lokusebenzela elijoliswe kuyo ukuze inkqubo ikwazi ukukopisha umgca ngaphantsi. Lo mzekelo ukhetha ukugcina inani lomgca wokugqibela kwiphepha lokusebenzela.
Ukugcina inani lomgca wokugqibela, kufuneka ugcine loo nombolo kwindawo ethile. Oku kunokuba yingxaki kuba umsebenzisi unokutshintsha okanye ususe inombolo. Ukuze ujikeleze oku, yibeke kwisisele ngqo phantsi kwefowuni yefom. Ngale ndlela, ayifumaneki kumsebenzisi. (Into elula ukuyenza yifaka ixabiso kwiseli uze uthumele iqhosha phezu kwayo.)
Ikhowudi yokukopa iRow usebenzisa i-Excel VBA
> I- Sub Add_The_Line () Imitha yangokuRow njengamaSpredishithi e-Integer ("iSheet1") Khetha okwangokuRow = Ububanzi ("C2") .Iimilinganiselo (7) .Khetha ukhetho.IiPopy Sheet ("iStet2"). ActiveSheet.Paste Dim DimDate As DateDate = Ngoku () Iiseli (okwangokuRow, 4) .Value = CStr (iDate) Iiseli (okwangokuRow + 1, 3) .Sebenzise i-DimTTalalCell As Range Setha rTotalCell = _ Iifayile ("iStet2"). Ukugcina (xlUp) .Ifset (1, 0) rTotalCell = Iphepha lokusebenzelaIsiqendu _ (Range ("C7", rTotalCell.Offset (-1, 0))) Iifomathi (" ") (" C2 "). Inani = okwangokuRow + 1 I-Sub Sub
Le khowudi isebenzisa i-xlUp, "inamba yomlingo," okanye ngaphezulu kwezobuchwepheshe rhoqo, ebonakalayo ngeendlela zokuphela. Ukukhutshulwa (1,0) kumisa umgca omnye kumqolo omnye, ngoko umphumo wenetha ukhetha i-cell yokugqibela kwikholam C.
Ngamazwi, ingxelo ithi:
Yiya kwiseli yokugqibela kwikholam C (efana neNkukuma + yeNtshonalanga).
Emva koko, yenyuka ukuya kwisityuli sokugqibela esingasetshenziswanga (esilingana nomlenze wokugqibela + ophezulu).
Emva koko, yenyuka enye iseli.
Ingxelo yokugqibela ihlaziya indawo yomgca wokugqibela.
I-VBA mhlawumbi ilukhuni kuneVB.NET kuba kufuneka ukwazi izinto zeVB kunye ne-Excel VBA. Ukusebenzisa i-xlUP ngumzekelo omhle wolwazi olukhethekileyo olubaluleke kakhulu ukukwazi ukubhala ii-macros ze-VBA ngaphandle kokujonga izinto ezintathu ezihlukeneyo kuzo zonke iinkcukacha ozikhokelayo.
UMicrosoft uye wenza inkqubela enkulu ekuphuculeni umhleli we-Visual Studio ukukunceda ukuba uqonde i-syntax echanekileyo, kodwa umhleli we-VBA akaguqukanga.
Uluhlu lweeNkcazo zeSisiseko
I-VB.NET: Yintoni eyenzekayo ukuLawula iiArrays
Umyalelo weNgingqi kwiVB.NET
Ngaba iNkonzo yoMhlaba yeeUyile iya kuphuma?
Yintoni iBhodi yeBhodi? Nezinye ii-FAQ
Ukuwa kobukhosi baseKhmer - Yintoni eyabangela ukuba uAngkor alahleke?
IsiCwangciso seSifundo soPhulo oluPhezulu